Posted on June 5, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Mabasa ezuva nezuva anogona kunge akaomera vakwegura uye vanhu vakaremara nekuda kwemamiriro avo. Nekudaro, izvo hazvifanirwe kudzikamisa iyo kugona kuzadzisa mabasa ezuva nezuva. Kune zvakawanda zvigadzirwa mumusika zvinogona kubatsira vakuru nevanhu vakaremara kuita kuti mabasa ezuva nezuva ave nyore kuita. Vamwe vanogona kutoita kuti mushandisi ave akazvimiririra mukuita basa pasina kukumbira rubatsiro. Pazasi pane zvigadzirwa zvinoda batsira kupa kutsigira uye rubatsiro yebasa rezuva nezuva.
At Karman Healthcare, isu tine rubatsiro rwezuva nezuva iwe rwaunoda kuti ubatsire iwe muzuva nezuva mamiriro. Dzvanya pazasi kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu:
Karman R4600 rollator
Karman R4100 rollator
rollator rakakura kufamba rubatsiro kuvanhu kuitira rutsigiro pavanenge vachifamba. Kazhinji ine mavhiri e3-4 pazasi izvo inopa kugadzikana uye inochengetedza mwero painofamba. Kwete chete zvinoita kuti kufamba kuve nyore, zvakare kunoita kuti iwe ugare pasi apo iwe unoda kufema kana kuva nenzvimbo yekuti iwe uise zvinhu zvako. rollator inouya nemhando dzakasiyana, saizi, uye zvinhu. Zvizhinji zvinouya zvakajairika zvinhu dzakadai semabhureki emawoko, nzvimbo dzinogadziriswa, uye chigaro chakapetwa. Vamwe vanotouya nebhasikiti kana pasi pechigaro chekuchengetera paunogona kuisa zvinhu zvako.
Karman hwiricheya Headrest
Kana uri wiricheya mushandisi, funga kudyara zororo remusoro izvo zvinobatsira kutsigira musoro wako kana ugere pachigaro kwenguva yakareba. Kwete chete zvinozviita kudzivirira kurwadziwa kwemutsipa kana kurwadziwa kwemutsipa, zvinokutendera kuti uzorodze musoro wako kuti uwane ruzivo rwakanyanya.
Karman Healthcare Mubhedha Unobatsira Njanji
Kusimuka pamubhedha wako kutanga zuva kazhinji kwatova kwakaoma. Nekudaro, kana iwe uri mukuru kana mumwe munhu akaremara, zvakatonyanya kuoma kana iwe uchida imwe yepamusoro muviri rutsigiro kuzvisimudza iwe pachako. Njanji yemubhedha ndiyo yakakwana zuva nezuva rubatsiro rwekubatsira iwe kumuka chero nguva yezuva. Ingo tsvedza njanji yemubhedha pasi pematiresi uye iwe unayo panjanji yekubatirira paunenge uchisimuka kubva pamubhedha.
Karman Healthcare Kubatsira Njanji
Batsira njanji inokutendera iwe kuti ubate ruoko bhaa kuti ubatirire paunenge uchisimuka kubva pamubhedha, recliner, kana chero kupi zvako mumba mako. It inopa kutsigira uye kugadzikana kusvika zvakachengeteka chinja kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe.
Karman Healthcare Shower Chair neRutsigiro Rutsigiro
Karman Healthcare Shower Chair
Shower Chair chinhu chikuru chekugezera chinofanirwa kuita kuti chiitiko chekugezesa chikachengeteka. Zvichienderana nesaizi yeiyo Shower Chair, unogona kuiisa munzvimbo yekugezera kana mubhavhu. Mira Shower Chair inouya ne4 aluminium makumbo uye yakasimba resin chigaro. Vamwe vanouya nerutsigiro kumashure kuti zvinyatsogadzikana kugara pasi. Kudonha kana kutsvedza muchimbuzi kune njodzi kuvakuru kana vanhu vakaremara. Kuva nekugeza chigaro chinodzivirira ivo kubva pakuitika. Shower Chair Inogona zvakare kubvumira mushandisi kugeza akazvimirira pasina kukumbira rubatsiro.
Wiricheya Inowanikwa Zvekunze Mabasa